Fanaankii Maxamuud Goox Qarboosh oo geeriyooday | Saraarnews
Fanaankii Maxamuud Goox Qarboosh oo geeriyooday
Inaalilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
Eebe ha u Naxariistee waxaa caawa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ku geeryooday Marxuum, Maxamuud Goox Qarboosh oo kamid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan Kooxdii DANAN muqdisho oo uu ka mid ahaa ragii wax ka aasaasay ayaa waqtigan ku noolaa ama ku dhaqna dalka Kenya gaar ahaana caasimada Nairobi.
Marwada, Marxuumka, oo iyana ah fanaanad caan ah Muslimo Qaasim Hilowle ayaa warka geerida marxuumka ku saabsan u xaqiijisay warbaahinta , waxaana ay sheegtay in Marxuumku uu u geeryooday cudur uu la ildarnaa mudooyinkii u danbeeyey iyo Sonkor si degdeg ah ugu soo booday waxyar un ka hor intii uusan geeryoon Fanaanku waxaana ay sheegtay in geeridaasi ay dad badan saamaynayso.
Marxuumka Oo isaga iyo Marwadiisii Hore Aamina Cabdulle Macow aanu ka wada tirsnaan jiray Kooxdii Fanaaniinta ee DANAN Muqdisho wuxuu ka mid ahaa saaxiibadii qaaliga ahaa ee igu soo dhoweeyey kooxdaas.
Eeba ha uraxmadee Mr.Qarboosh ayaa ahaa fanaan siweyn looga jecelyahay dalka Kenya isagoona si gaar ah u jili jiray riwaayadaha iyo Mujaajilooyinka maadda loogu talagalay ee dadka Soomaaliyeed ay aad uga helaan iyadoona la rajaynayo in beri aas qaran loogu sameeyo magaalada Nairobi.
Anigoo ah Mubarak Mohamed Nur qoorubaxay ( Ex- qawdhan) waxaan marxuumka iyo eheladiisa u rajaynayaa inuu Marxuumka Janadii ka waraabiyo dhamaanteena samir iyo iimaan inaga siiyo. aamiiiiiiiiiiiin
Daawo: Dr. Cali khaliif Galaydh intaanu Lacagta la baxsan.
Dr Cali khaliif oo Sii khaatumo seegay oo 76 cod keliya helay